Mabhuku akanakisa epfupi
Iwo matatu akanakisa mabhuku eEtgar Keret
Kazhinji kacho rondedzero ipfupi inosvika pane inofungidzirwa kukosha kwakanyanya kweruzivo kana rondedzero semabasa ekufananidzira emunyori ane hunyanzvi. Ndokusaka nyaya yaEtgar Keret iri yemunyori wenyaya uye nyaya anowana mavari chikamu chepamusoro chekuzadzikiswa kwerondedzero. Kupfuurisa …
Quartet, naSoledad Puértolas
Iyo denderedzwa kukwana, rwendo rwekusadzoka, iyo infinity pakupedzisira yakavharwa. Iyo mraba yakatendeka kune chaiko hupenyu. Geometry ichiri padyo padyo neyakafanira kukwana asi pakupera kwezuva nemakona ayo asingadzivisike nemipendero. Soledad Puértolas anotisvitsa kumusoro kweiyi quartet, ...
Kubata Denga, naCixin Liu
Ini nguva pfupi yadarika ndakaverenga kuti hombe bang inogona kunge isiri kutanga kwechimwe chinhu asi kuguma. Izvo zvataizozviwana isu timene mune yekupedzisira chords ye symphony yeUniversal. Mubvunzo wevanyori vakuru venganonyorwa vanyori vezera ripi neripi kuona iwo mafambiro echikonzero ...
Shiri mumuromo nedzimwe nyaya, naSamanta Schweblin
Nyaya yakanaka inogona kureba serwiyo. Samanta Schweblin anoita ezvinyorwa kuongororwa kwehupenyu hushoma huchiperekedzwa nenziyo yemamiriro avo ezvinhu. Nyaya dzaSamanta dzinomutsa iyo isingagumi mimhanzi kudzokorora kwekunakidzwa uye ndangariro. Izvo zvinosara, chimwe chinhu chinofanirwa kufamba senge echo ...
Ngatidyei neChishanu nhema, naNana Kwame Adjei-Brenyah
Pakati pezvino nezuva richangoburwa, rimwe nerimwe zuva nyowani uchave mukana mutsva wekunakirwa nekushandisa kwakanaka kwezvisingakoshi uye zvechirango. Izvo zvese inyaya yekunyora kunyangwe nguva yedu sekupa. Iyo poindi ndeyekuti Nana Kwame Adjei-Brenyah (pamwe rimwe zuva anozofunga kuzvidaidza nechiratidzo, ...
Shanduko yehupenyu, naXavier Sardà
Bhuku rakanaka renhau pfupi senge iro iro rakanaka Xavier Sardà rakapfupisa pano haritomborwadzi. Chinhu chakanakisa pamusoro pebhuku renhau pfupi ndechekuti shinda hainyatso kuve yakajeka. Nekuti isu tinokwanisa kunyora yemahara chimiro pakuziva kwedu. Kuonekwa seizvi, anenge munhu wese ...
3 akanakisa mabhuku naAlberto Chimal
Kune avo vanouya kumabhuku mapfupi vogara. Ramangwana remunyori wenhau pfupi chimwe chinhu senge dai Dante anga asati ambowana nzira yake yekubuda mugehena. Uye ipapo Dante akagara kune rimwe divi uye Chimal pane rake, sekunge aifarira mune iyo inoshamisa limbo ye ...
Kuputsa paEdge yeGirazi, naEtgar Keret
Akasarudzika muchidimbu, sevamwe vazhinji vanotaura nyaya vanhasi saSamanta Schweblin uyo waanogona kuwanikwa naye mune kuwirirana, murume akanaka wekare Etgar Keret anotipa huwandu hwenyaya dzinovhiringidza mune yaimbove yake yekuvandudza budiriro. . Chinja chidzidzo,…
Guta remhepo, naCarlos Ruiz Zafón
Hazvibatsiri kushandisa kufunga nezve izvo zvasara kutaurira Carlos Ruiz Zafón. Vangani vatambi vakaramba vakanyarara uye mangani matsva matsva akanamira mune iyo inoshamisa limbo, sekunge yakarasika pakati pemashefu emakuva emabhuku. Nemufaro wekuti imwe yakarasika pakati pemakoridho ...
Kurara futi, naPD James
Wese mukuru wenhau anowana mumhando yeiyo pfupi yekuvaraidza, rusununguko kana kunyange zaruriro. Nekudaro, munyori mukuru saPD James akaremekedzawo pane iyo nyaya kana ngano senzvimbo iyoyo yekubatanidzwazve nechinyorwa kana nemasisis. Nekuti apo iyo ...
Mazuva anotyisa. by AM Homes
Kukura kwekushambadzira kweMisha kunoratidzwa mune bhaibhurari iyo inotsanangura chimiro chakashongedzwa pachinyorwa chenyukireya chakakomberedza mhuri kune rimwe basa nyowani. Ehezve, izvo zvinoitika zve Dzimba, hudiki hwake mukurerwa uye maficha emhuri yekuzvarwa iyo ...